प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: कसरी बढ्यो बेरुजु ? यो त भ्रष्टाचार होइन र ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: कसरी बढ्यो बेरुजु ? यो त भ्रष्टाचार होइन र ?
काठमाडौं , साउन १५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक नियम कानुन भित्र बस्नु पर्ने बताएका छन् । महालेखा परीक्षकको २०७४/०७५ लेखा परीक्षणसम्बन्धी सिंहरदबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका हुन् ।
राजनीतिले देशलाई बाटो देखाउने भएकोले राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
कार्यलयहरुमा बेरुजु बढ्नु मुलुकको सशासनका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए । 'के कारणले बेरुजु भएको हो ?', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'जानाजान बेरुजु गर्नु भनेको भ्रटाचार हो, त्यसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने राज्यका कुनै पनि निकायले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् । बढ्दो बेरुजुले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको शाख गिराउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
'नेपाली भ्रष्टचार गर्ने र ठगठाग गर्ने जाति होइन', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'तर हामीमा मौलाएको महत्वकांक्षा र गलत संस्कारले नेपालीलाई भ्रष्टाचारतिर तान्यो । यो क्रमलाई अब यही बिराम लगाउनु पर्दछ ।'
बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा ४८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र मन्त्रालयका सचिबहरुको उपस्थिती थियो । - अन्नपूर्ण पोस्टबाट
7/31/2018 04:29:00 PM